Tahirim-bola Iraisam-pirenena Mila ezaka i Madagasikara amin’ny fampidiran-ketra
Betsaka ireo ezaka mila iantsorohana hampiaingana ny toekaren’i Madagasikara, hoy ny solontenan’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI),
Marc Gérard nandritra ny fandalovany teny amin’ny antenimierandoholona omaly. Namelabelatra tamin’ity andrim-panjakana ity mahakasika ny andraikitry ny Tahirim-bolam-pirenena ny tenany. Nambarany fa ankoatra ireo ezaka maro tokony hatao hanatsarana ny harifaobe ankapoben’i Madagasikara dia ilaina ny fiheverana sy fanatsarana ny fampidiran-ketra. 0,2% monja no mandoa ny 80%-n’ny hetra eto amin’ny firenena Malagasy hoy ny tatitr’i Marc Gérard. Ilaina, araka izany, ny politika mazava amin’ny fampidiran-ketra, indrindra ny amin’ireo sehatra tsy ara-dalàna maro be.
Malalaka amin’ny findramam-bola i Madagasikara
Neken’ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena ny drafi-pivoaran’i Madagasikara PEM izay nozarain’ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola tany Washington farany teo nandritra ny fivoriambe. Na izany aza dia ilaina mazava sy hamafisana ireo tena vaindohan-draharaha. Vonona ny hifanampy amin’i Madagasikara izy ireo ary hiroso tsy ho ela ny fifampidinihana eo amin’ireo famatsiam-bola isan-tokony Mahakasika ny fandaharan’asa FEC (Fonds Elargie de Crédit) andiany faha-6 dia malalaka i Madagasikara amin’ny findramam-bola. Anjaran’ny mpitondra firenena ny mijery ny laharam-pahamehana ary manosika ara-teknika sy ara-bola ny amin’ny fanatanterahana izany ny FMI, hoy izy.